ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၃)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 5, 2013 in Photography | 26 comments
အများသုံးနေကြတဲ့ လိပ်ခေါင်းလန်းစ် လေးပါတဲ့ ကော်ဆူးမား ကင်မလာ တွေ၊ ပလိုဆူးမား ကင်မလာတွေမှာ လန်းတွေက အသေဖြစ်နေပေမယ့် (လန်းစ်ပြောင်းလို့ရတဲ့ ကင်မလာ အသေးလေးတွေလဲရှိပါတယ်။ Sony Nex7, Nikon1..) ငုတ်တုတ် လိပ်ခေါင်းလန်းစ် လေးက ဇွန်းဆွဲလို့ တော်တော်ရပါတယ်.. အောက်မှာ ဂီဂီရဲ့ မတ်ဆေ့ကို ခွက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပါတယ်။
[ဇွမ်း ဆွဲတဲ့အခါ ဇွမ်း ဘယ်လောက်ဆွဲထားပြီ ဆိုတာကို ပြတဲ့ ဘားလေး စကရင်ပေါ်
ပေါ်လာတာ ကြည့်ဖူးမယ် ထင့် အဲ့သည့်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ် လိုင်းလေး တစ်လိုင်းပါတယ်..
အလယ်လောက်က ကန့်လန့်ဖြတ် လိုင်းလေးရဲ့ ဘယ်ဘက် ခြမ်းက Optical Zoom ခည…
လိပ်ခေါင်း lens လေး ၀င်ကာထွက်ကာ နဲ့ ချိန်ညှိပေးတဲ့အပိုင်း
ညာဘက်ခြမ်းက အပိုင်းကတော့ Digital Zoom ဗျ.. သူကျတော့ ကွန်ပူတာမှာ
စကရင် တ၀က်လောက်ရှိတဲ့ ပုံ ကို စကရင် အပြည့် ချဲ့ကြည့်တာ နဲ့ သဘောတရားတူတယ်..
(ပြောချင်တာ Pixel ကျတယ်ပေါ့)
နောက်တခု သေဖို့ကောင်းတဲ့ မာကတ္တာ တချို့ လက်ချက် ကြောင့်လည်း ပါတယ်ခည…
လိပ်ခေါင်း ကင်မလာတွေ ၀ယ်ရင် လူတွေက Zoom ဘယ်လောက် x ရလဲပဲ ကြည့်တတ်ကြတာရယ်..
ဆိုပါတော့ 10x, 15x, 20x ရေးထားကြတယ်..
ဆိုပါတော့ 20x သေချာရှာကြည့် တော့မှ 16x အထိပဲ Optical Zoom (အမှန်တကယ် Zoomတာ)
16 to 20 (အပေါ်က လိုင်းကလေးရဲ့ ညာဘက်) က Digital Zoom (ပုံရိပ်ဆွဲဖြဲတာ)ဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျို့ ..
ဖုန်းကင်မလာ လို ကင်မလာမျိုးဒွေမှာ Zoom ဆွဲရိုက်လေ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကျလေဆိုတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဗျ.. သူ့မှာ လိပ်ခေါင်းမှမရှိတာကော…Digital Zoom နဲ့ပဲ ပုံကို ဆွဲဖြဲ သလို ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ်ပါ။]
DSLR တွေမှာတော့ အရင် ပို့စ်တွေမှာ ပြထားတဲ့ လန်းစ်တွေ အမျိုးမျိုးကို ဖိုကယ်လန့် ဆိုတာနဲ့ အဓိက ခွဲထားပါတယ်. ဖိုကယ်လန့် (focal length) ဆိုတာ ကင်မလာ ထဲက ဆင်ဆာ နဲ့ မှန်ဘီလူးရဲ့ စင်တာ အကွာ အဝေးဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုကယ်လန့်ကိ mm နဲ့ဖော်ပြပီး. လန်းစ်တွေမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ဖူးမှာ ပါ။
ဖိုကယ်လန့်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှု ၂ ခုဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ခုက မြင်ကွင်း နဲ့ နောက်တစ်ခု အနီး/အဝေး ဖြစ်ပါတယ်
ဖိုကယ်လန့် တိုတာ/ရှည်တာဟာ မြင်ကွင်းကို ပြောင်းလဲ သွားစေပါတယ်.. ဥပမာ လက်ညှိုးနဲ့လက်မကို ကွေးပြီး မျက်လုံးနဲ့ ကပ်ကြည့်ပါ ..
မျက်လုံးနဲ့ လက်ကအ၀ိုင်း ကပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ကျယ်နေပေမယ့် လက်ကို ရှေ့တိုးလေလေ လက်ရှေ့ကြိုမင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကကျဉ်းသွားလေလေ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲလိုပါပဲ ဖိုကယ်လန့် နည်းတဲ့လန်းစ်ဟာ ပိုမြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ်မြင်ရပြီး .. ဖိုကယ်လန့် ရှည်သွားတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ကျဉ်းသွားပါတယ်။
မှန်ဘီလူးကို အနီးကပ်ကြည့်တာနဲ့ အဝေးကို ခွာလိုက်ရင် ကြည့်နေတဲ့ ဆက်ပဂျက်က ပိုကြီးသွားသလိုပါပဲ အဲဒီတော့ ဖိုကယ်လန့် နည်းတဲ့ လန်းစ်မှာ ဆက်ပဂျက်ကို သေး မြင်ရပြီး .. ဖိုကယ်လန့် ရှည်သွားတဲ့ အခါ ဆက်ပဂျက် ကိုပိုကြီးကြီး မြင်ရပါတယ်။
တမီး အရင် ရောက်ပါတယ် တီချာ အုပ်။
ရှေ့ဆုံး အရင် နေရာလာဦးတာပါ။
ပြီးမှ သင်ပုန်းပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ ကူးပါ့မယ်။
ဟဲ့ တယ်မြန်ပါလားကွယ်..ဟုတ်ပီ ဟုတ်ပီ တမီးလေးက အရမ်းတော်တာပဲနော်
ကျမ တော့ ကင်မလာနဲ့ ရိုက်သွားပါတယ်ရှင့်။ အိမ်ရောက်မှသေသေချာချာပြန်ကူးပါမယ့်ရှင့်။ Part time တတ်တုန်းကကျောင်းမှာလုပ်နေကျအကျင့်တွေကျန်နေသေးလို့ပါ။
ကျုပ် က တော့ ဖတ် ရုံ ပဲ တတ် နိုင် တယ် ဗျာ
အဲဒီလို ကင်မရာ လဲ မဝယ်နိုင်ဘူး ( နှမြောတာလဲ ပါ တယ်)
အဲသလို ဖြေးဖြေးချင်းသင်တာ ကျုပ်လို ခပ်ဝေးဝေး လူကြီးတွေအတွက်တော့ အတော်ပဲဗျ…
သင်တန်းပြီးရင် ကင်မလာ တစ်လုံး ပေးမယ်ဆိုလို့ နတ်ပြည်က တကူးတက ဆင်းလာတက်သဗျို့ :harr:
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင့်​မြင့်​တန်း​ရောက်​လာပြီး။ကျ​နော်​အတွက်​​တော့ အဆင့်​မြင့်​လို့​ပြောတာပါ။
ကျ​နော်​က အခုဖုန်းကင်​မရာနဲ့ပဲ လိုအပ်​ရင်​ရိုက်​​နေတာပါ။အခုအပိုင်းမှာ ကျ​နော်​အတွက်​ အသိတိုး
​စေတဲ့အချက်​ အ​တော်​များများပါလို့ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဆရာအုပ်​နှင့်​ ဂိုက်​ဆရာ ကိုဂီ ခင်​ဗျာ။
တစ်လုံးက 18-55 mm တဲ့။
လိပ်ခေါင်းလဲန်စ် လေးက 5.8-23.2mm တဲ့ ။
သေသေ ချာချာ ကိုစောင့် ဖတ်နေတယ် နော့ . . စေတနာ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ . . ။
သင်တန်းလာတက်ပြီးနောက် ကင်မရာဝယ်ချင်စိတ် ပေါက်မိတယ် …
ဘယ်လို ကင်မရာအမျိုးအစား ၀ယ်ရင်ကောင်းမလဲ? ၃ သိန်းနဲ့ ၅ သိန်း ကြားလောက်ပဲ သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကင်မရာကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရနိုင်မလား??
ကင်မလာဝယ်ဖို့လမ်းညွှန် တော်ကြာ တင်ပေးပါမယ် ဘယ်တော့ဝယ်မှာ လဲဗျ
၀ယ်ဖို့တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ .. ဘာဝယ်ရမှန်းမသိသေးလို့ သင်တန်းအရင်တက်နေတာ ..
ခဏလေးစောင့်ပါ ကျနော် ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်ပေးပါမယ်
အပိုင်းသုံးကို ဖတ်ပြီးပြီ လေ့လာပြီးပြီ ဖြစ်၍ အပိုင်းသုံး တတ်မြောက်ပြီးကြောင်း ဆာတီဖီကိတ် ထုတ်ပေးစေလိုပါကြောင်း…။
စကားမစပ် လိပ်ခေါင်းကင်မလာ မရှိသဖြင့် လိပ်ခေါင်းရှိသူများမှခေတ္တ ငှား၍ပြပေးစေချင်ကြောင်း…
စာတီဖီကိတ်က အားလုံးပြီးမှ ရမှာ လေ တစ်ပိုင်းဆီမပေးဘူးနော် ဟွန်း
လိပ်ခေါင်းက ဘယ်ဆိုဒ်ကြည့်ချင်လဲဗျ.. ၁၁မမ လား ၅၀မမ လား ၃၀၀မမ လား ကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုဒ်ပြော
ဟာာဂျာ ချာအုပ် တားတား နဲနဲ နောက်ကျတွားတယ်……..ချစ်သုအုပ် ဆေးခန်းသွားပြနေလို…
အမှီလိုက်ကူးတယ်…….. လက်ချာက နောက်ကျသွားပီ…
ဟိုနေ.က ကျွန်တော် မြို.ထဲမှာ ဖော်ရိန်နာ တစ်ယောက် ဆိုနီကင်မရာ အသေးလေးကို ပြောင်းတပ်ထားတာ တွေလိုက်တယ်….. လက်နဲ.ပြောင်းကိုပဲ ကိုင်ထားတာ…
ကျွန်တော် ကင်မရာက ဆိုနီပဲ… လိပ်ခေါင်းလန်းလေး ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်လို.ရတယ်.. ၁၆ ဗျ..
လိုချင်လို……….. ၀ယ်ပေးပါလား……… အဟိ
Sony Nex7, Nikon1 လိုဟာမျိုး နောက်ထွက်တဲ့ မယ်ရာလက်စ် ကင်မလာ တွေမှာ ပြောင်းလဲတပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူ့ပြောင်းနဲ့သူမှ တပ်လို့ရတာပါ.. ပုံမှန် လိပ်ခေါင်းလန်းစ်တပ်တဲ့ ကင်မလာတွေမှာ ပြောင်းလဲ တပ်လို့မရပါဘူး..
တိုက်တိုက်လိုချင် ၀ယ်ပေးမှာ ပေါ့
ဟင့်. ဒါဆို အဲဒီ မယ်ဒေါ်တွေ ၀ယ်ကိုင်ရမှာပေါ့နော် အဟင့်………
ဆြာအုပ်ပြောတဲ့ ၁၆ မမကို ပြောင်းတတ်ချင်တာလား..
မေရာလက်တွေက ပြောင်းလဲတတ်လိုက်ရင် လိပ်ခေါင်းလို ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်autoလုပ်လို့မရဘူး
ဝင်ချင် ထွက်ချင်ရင် လက်နဲ့လုပ်ရတယ်ဗျ..။
ဟာ ဒီ ကိုနွေဦးဂျီးဗျာ..
သင်တန်း ၀င်တက်သွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
ဟိုးး အတန်း နောက်ဆုံးဂနေ လာတက်တွားဒယ်နော် …
ဒါနဲ့ .. ဘယ်အချိန် သင်ဂန်းစာ ကုန်မတုံး သိဝူးးး
ဒီဂ စာတီဖီကိတ် လိုဂျင်လှဘီ …
သင်တန်းတက်တာ နောက်မကျပဲ အတန်းဒန့်စ် ထိုးတာ နောက်ကျနေတယ်။
စာဖတ်လိုက် ပုံကြည့်လိုက်နဲ့ စာကြေအောင် ဖတ်နေရလို့။
သင်တန်းမပြီးခင် ဆာတီဖစ်ကိတ် လိုချင်တယ်ပြောတဲ့သူတွေကို ဂျောက်တွန်းသွားသည်။ :harr:
ပထမဆုံးသင်တန်း ကတဲက ‌ရေးမရလို့အခုမှ ‌ရေးရတယ်
ပြီးရင်လဲ စာအုပ်‌လေး လုပ် တင်‌ပေးပါ‌နော